musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India neGerman Bilateral Tourism Chibvumirano Chasainwa
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
India neGerman chibvumirano chekushanyirana chakasainwa
rakanyorwa Anil Mathur - eTN India
India neGerman vakasaina chibvumirano chekudyidzana kwenyika mbiri kuburikidza neIndia Association of Tour Operators (IATO) neDeutscher Reiseverband eV, (DRV) yeGerman Travel Association kusimudzira nzira mbiri dzekushanya pakati penyika mbiri nekutora matanho akakodzera ekudzorera kushanya kana mamiriro acho ezvinhu zvakajairika, vakadaro VaRajiv Mehra Mutungamiri weIATO.
IATO neDRV vakabvuma kuita zvine mutsindo kuita kuti nhengo dzayo dzizive kuve nhengo yemasangano ese, mabhenefiti awo, uye zviitiko muIndia neGerman.
Masangano ese ari maviri achaitisawo chirongwa chekuchinjana mafambiro uye chirongwa chekudzidzisa nenzira inowirirana.
Kusainwa kwechibvumirano ichi kunotumirawo meseji kune dzimwe nyika muEurope kuti India yakagadzirira kugamuchira vese vashanyi vekunze.
Chibvumirano chekudyidzana chakasainwa naVaNorbert Fiebig, Mutungamiri - Deutscher Reiseverband eV, German Travel Association, naVaRajiv Mehra, Mutungamiri, Indian Association of Tour Operators, kutora izvi mberi.
Pasi pechibvumirano ichi, vese IATO neDRV vakabvuma kuita zvine mutsindo kuita kuti nhengo dzayo dzizive nezvekuva nhengo yemasangano ese, mabhenefiti, uye zviitiko muIndia uye Germany. Vakuru vemasangano ese vari vaviri vachakokwa kumisangano yavo yegore rega uye vanozoitisa chirongwa chekuchinjana mafambiro uye chirongwa chekudzidzisa nenzira yekudzokerera.
Germany ndeimwe yemisika mikuru yekushanya kwakazara kuIndia, uye izvi zvichabatsira kumutsidzira kushanya kuri mukati kuenda kuIndia uye ichabatsira vashanyi vekunze vanobuda kubva kuGerman kuti vadzorezve kutengesa mapakeji eIndia.
Chibvumirano chakasainwa pakati peDRV neIATO hachizovhure magonhi chete IATO nhengo kubatana nenhengo dzeDRV asi ichatumirawo meseji kune dzimwe nyika muEurope kuti India yakagadzirira kugamuchira vese vashanyi vekunze kana e-Tourist Visa uye nendege dzenyika dzatangwazve.
India neGermany vane nhoroondo yakareba pamwe chete. India yaive chikamu cheBritish Crown panguva yeWWI, uye panguva iyoyo, yeBritish Indian Army yakarairwa kuti ipe varwi kuhondo yeAllied war, kusanganisira kuWestern Front. Vanotsigira-kuzvimiririra mukati memasoja echikoloni vakatsvaga rubatsiro rweGerman mukuwana rusununguko rweIndia, zvichizoguma neHindu -German Kurangana panguva yeHondo Yenyika I. Zvino panguva yeHondo Yenyika II, kurwira kweAllied hondo kwakaunganidza mauto emamiriyoni maviri nemazana maviri ekuzvipira kubva kuBritish India.
IRepublic yeIndia yakanga ichangoumbwa yaive imwe yenyika dzekutanga kupedza State of War neGerman mushure meHondo Yenyika II uye haina kutora kurwira muhondo kubva kuGerman kunyangwe zviuru makumi maviri nezviviri zvemauto aishandira muBritish Indian Army vakafa muhondo yekurwisa Nazi Germany .
India yakachengetedza hukama hwekudyidzana nevese West Germany neEast Germany uye vakatsigira kubatana kwavo mu1990.
Chancellor weGerman Merkel uye Mutungamiriri weIndia Modi
Mune imwe nguva yemazuva ano, Chancellor weGerman Angela Merkel akaita kushanya kwakawanda kuIndia uko kwakatungamira kusaina zvibvumirano zvakati wedzere kudyidzana kwenyika mbiri, nekuchangobva kuitika munaNovember wa2019 pakasainwa zvibvumirano gumi nemana pakati peIndia neGerman.
Tourism Crises & Destination Recovery: Nyowani Inofanira...
Rwendo rweVashanyi runotangisa rwendo rwekutanga pasi rose...
UNWTO General Assembly Kumisikidzwa Kunokurudzirwa: WTO iri ...
A New Monster COVID Virus: Evades Vaccine, Inopararira nekukurumidza
Qatar Airways inobata musangano mukuru wepagore wechi54 we…
Vadyidzani veItaly Tora Rutsva Ruzivo rwekufamba kubva kuSeychelles
Mumwe mutyairi wendege akafa, vaviri vakakuvara mundege mbiri...
Brussels Airlines inopa chitupa chitsva chekuzivikanwa
118% yakabaiwa Gibraltar inodzima Kisimusi pane itsva ...